Waxyaabihii la Yaabka Lahaa Ee Lagu Arkay Jeel Ogaadeen Iyo Dad ka Sheekeeyay Sidii Loo Ciqaabi Jiray+Dhacdooyin Murugo Leh. | Berberatoday.com
Waxyaabihii la Yaabka Lahaa Ee Lagu Arkay Jeel Ogaadeen Iyo Dad ka Sheekeeyay Sidii Loo Ciqaabi Jiray+Dhacdooyin Murugo Leh.
Jigjiga(Berberatoday.com)-Waxaa si kama dambays ah loo xaqiijiyey in la xidhayo jeelkii dhexe ee dawlad degaanka Soomaalida ee loo yaqaannay Jeel Ogaadeen.
Bashir Axmed Xaashi oo ah taliye ku xigeenka ciidanka asluubta dawlad deegaanka Soomalida oo arrinta xidhitaanka xabsigaas BBC-da uga warramay ayaa sheegay in tallabadaas ay soo dhawaynayaan ” aad ayaan usoo dhawaynayaa waana maalin farxadeed sababtoo ah muddo dheer ayaa jeelkan ummadda lagusoo dhibaataynayey, dad badan baa gaajo ugu dhamaaday, dad badan baa ku laxaad beelay, dad badan baa xanuuno intay ka qaadeen u dhintay”.
GOD KU DHEXYAALAY JEELKA;
Jeel Ogaadeen oo xidhitaankiisa ay go’aamiyeen golaha wasiirrada dawlad deegaanka ayaa waxaa maanta soo buux dhaafiyey dadweyne ku faraxsan tallaabadan, qaar kamid ah dadkaas oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in ayaga qudhooda lagu xidhay xabsigaas, halka kuwo kale ay sheegeen in xigtadoodu ay ku xidhnaan jireen, dadkaas waxaa kamid ahaa Ismaaciil Buugaabo oo muddo dheer ku xidhnaa Jeelkaas wuxuuna sheegay in dhibaatooyin kala duwan loogu gaystay xabsiga asagoo sheegay in aanu hal habeen nabadgalyo ku seexan mudadii uu xidhnaa isla markaasna lagu riday god dheerarkiisa uu ku sheegay lix mitir oo lagu shubo qashinka musqulaha iyo bullaacadaha uuna ku jiray afar iyo toban cisho kuna indho beelay.
Maxaad ka taqaan “Jeel Ogaadeen”?
Dadkii lagu Xidhay Jeel Ogaadeen oo ka sheekeeyay dhacdooyin naxdin leh.
Warbixintan waxaan ka soo ururinay dad wakhtiyo kala duwan lagu xidhay xabsiga Jeel Ogaadeen. Magacyadooda waxaan u qarinnay sababo amaankooda la xidhiidha.
Waxaa magaalada Jigjiga laga fogeeyey xilligaa 5-6 KM, dhinaca qorrax ka soo baxa ee togga Faafan, laakinse hadda magaalada ayaa fidday oo dhaaftay, waxaana la oran karaa wuxuu ku yaallaa bartamaha magaalada.
Labada nin – ee ninna uu qandaraaska dhismaha xabsiga bixiyey, ninna uu dhismihiisa qandaraaska ku qaatay – labada isaga ayaa markii dambe lagu xidhay.
Qaybta ugu hoosaysa waxaa lagu xidhaa dadka laga soo qabto jabhadda ONLF, waana meesha ugu xun.
Qaybta dhexe waa qaybta lagu xidho dadka “rajada leh”, ee la aaminsan yahay in mar uun ay soo bixi doonaan.
Qaybta seddexaadna waxa lagu xidhaa siyaasiyiinta, ganacsatada, xubnaha maamulka ka soo shaqeeyey iyo duqeyda. Waxaa ku yaalla meel yar oo masaajid ah oo lagu tukado.
Qaybaha dumarka ayaguna waa la mid. Kiisaska qaar, xataa waxaa la sheegay in dumarka carruurtooda lala xidhi jiray.
Xilligaas waxaa loo yaqaannaa, sida ay maxaabiistii waagaas xabsiga ku xidhnayd noo sheegeen “xilligii geerida iyo garaaca”.
Xilliyadii sannadahaa ka dambeeyey ee aadka loo ugaadhsan jiray ONLF ayey maxaabiistu sheegeen in maamulka xabsiga uu soo rogay in cunnada iyo biyaha laga jaro maxaabiista, waxaana 24kii saac la siin jiray cunno hal mar oo qudha, taasoo ahayd canjeerada loo yaqaanno Daafida oo la mariyey “Widdi”.
Sheekooyinka naxdinta leh ee maxaabiistu ka sheekeyeen waxaa ka mid ah „Gidhibka”. Waa meel biyo xidheen ah oo ku taalla duleedka magaalada, waxaana la dhisay xilligii uu dalka maamulayey Mingiste. Ujeeddada loo dhisay biyo xireenkaas waa arrimo la xiriira tacbashada beeraha.
Ma jirto cid nooga warrantay waxa lagu muto gudaha qolalkaas. Dadkii lagu xidhay markii aan arrimahaas weydiinnay way naga aamuseen, qaarna wayba ka naxeen markii ay soo xusuusteen. Qolalkaas waxaa lagu sheegay in kiiba uu si ciriiri ah u qaado hal qof.
Qofka kaliya ee naga ogolaaday in aan magaciisa sheegno waa Suldaan Fowsi Suldaan Maxamed Cali oo xabsiga ku xidhnaa muddo dheer. Wuxuu noo sheegay in shantii sano ee ugu dambeysay muddadii uu xirnaa, lagu hayey kaligii qol ciriiri ah oo uu ku qiyaasay laba mitir. Wuxuu kaloo sheegay in muddo bil ah maalin kasta bakoorado ay ku garaaci jireen “laba nin ilaa ay ka daalaan”.
“Ilaa maanta way igu soo kacdaa jugtii berigaa igu dhacday” ayuu yidhi Suldaan Fowsi.
Xabsigaas waxaa la yidhaahdaa “xabsiga dhexe ee dawlad deegaanka Soomaalida”, hase yeeshee sababta jeel Ogaadeen loogu bixiyey ayaa ah maadaama dadka ku xidhnaa 60% ay ahaayeen dad ka soo jeeda deegaanka Nogob. Waxay u badnaayeen taageerayaasha ONLF.
Inkastoo uusan dhisme ahaan ka weynayn 100 mitir oo dhan kasta ah, haddana dadkii ka soo baxay waxay aaminsan yihiin in tirada maxaabiista halkaa ku jirtay ay u dhaxaysay 33000 – 35000 oo qof. Waxaa jira dad ku dhex dhintay xabsiga sababo la xidhiidha daryeel la’aan.